एनआरएनए अष्ट्रेलिया निर्बाचन:एनएसडब्लु सचिबको मत संख्यामा हेरफेर
११ जुलाई । गैर-आवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाको हालै सम्पन्न निर्वाचन पछि बिभिन्न टिका-टिप्पणी सुरु भएका छन् । अनलाईन भोटीङ सिष्टमको कारण मत संख्या नमिलेको कारण टिकाटिप्पणी चलेका हुन् । एससिसि एनएसडब्लुको सचिब पदमा दिपक पहारी बिजेता घोषणा गरिएको छ । जुलाई ६ को घोषणा नत...
मतदाता विवरण सार्बजनिक बारे छानबिनको माग गर्दै अनलाईन हस्ताक्षर
१० जुलाई सिड्नी । शनिबार अष्ट्रेलियामा सम्पन्न गैर-आबासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाको निर्बाचनले नयाँ कार्य समिति पाईसकेको छ । केशब कडेल अध्यक्ष घोषणा भईसकेको छ । तर,निर्बाचनका बारे बिभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । निर्बाचनकै दिन दिउसो १ बजेको समयमा दर्ता रहेका मतदाताक...
सबै पदमा पराजित साझा समुह
७ जुलाई सिड्नी । गैर आवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाको शनिबार सम्पन्न निर्बाचनमा अध्यक्ष पदमा केशब कडेल बिजय भएका छन् । कडेलले ४१४८ मतले बिजय प्राप्त गरेका थिए भने,उनका प्रतिदन्दी दिनेश पोख्रेलले ३७५७ मत ल्याएका थिए । ३९१ को भारी मतले कडेलले चुनाब जित्ता मुख्य पदहरुमा उन...
निर्बाचन काण्ड: के भएको थियो सिड्नी बुथमा ?
७ जुलाई सिड्नी । शनिबार अष्ट्रेलियामा सम्पन्न गैर-आबासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाको निर्बाचनले नयाँ कार्यसमिति पाएको छ । निर्बाचन बाट केशब कडेल अध्यक्षमा निर्बाचित भएका छन् । देशभर १४ स्थानमा मतदान चलिरहेका बेला सिड्नीको बुथमा करिब २ बजेको समयमा मतदाताको मोबाईलमा आएको ...
जस्ले ल्याए सर्बाधिक मत !
जब एक भोटले पराजित बनिन् सुजता
६ जुलाई सिड्नी । गैर आवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाको शनिबार सम्पन्न निर्बाचनमा अध्यक्ष पदमा केशब कडेल बिजय भएका छन् । कडेलले ४१४८ मतले बिजय प्राप्त गरेका थिए भने,उनका प्रतिदन्दी दिनेश पोख्रेलले ३७५७ मत ल्याएका थिए । ४६१ को भारी मतले कडेलले चुनाब जित्ता मुख्य पदहरुमा उन...